नेकपा : बाँच्‍नका लागि एक मात्र बाटो — Purbicommand
२०७७ श्रावण २६, सोमबार १२:२० गते
आज नेकपा–साम्राज्यका नायकहरू आफ्नै कमरेडहरूसँग बैठकसम्म बस्न नसकेर दुनियाँसामु एकअर्कालाई दुत्कार्दै छन् । यिनको बाटो स्पष्ट छ : एकअर्कालाई नङ्ग्याउने र सबै नाङ्गिने ! यसरी हेर्दा आज नेकपासँग सबै थोक छ, तर विधि छैन; त्यसैले केही पनि छैन .
‘मान्छेले आफ्नो भाग्य आफैं बनाउँछ, तर पहिले नै बनिसकेको परिस्थितिमा टेकेर बनाउँछ ।’ यो निष्कर्ष दर्शनशास्त्रमा मार्क्सले गरेको एउटा असाधारण योगदान हो । परिस्थिति र क्रान्तिकारीको तानातानीको अध्ययन द्वन्द्ववाद हो । क्रान्तिकारीले परिस्थितिलार्ई फेर्दै अगाडि बढ्छ, नसक्दा परिस्थितिका अगाडि घुँडा टेक्छ । यसरी हेर्दा नेकपाले आफ्नो भविष्य आफैं बनाउँछ, तर दलाल पुँजीवादी परिस्थितिमा टेकेर बनाउँछ । परिस्थितिलाई फेर्छ कि त्यसका अगाडि घुँडा टेक्छ भन्ने कुरा नेकपाजनका कर्मले, खास गरी त्यस पार्टीको दोस्रो भनिने पुस्ताका कर्मले बताउनेछ ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०९:०२ ईकान्तीपुरवाट
काँग्रेस मिक्लाजुङ सभापतिमा बस्नेतको उम्मेदवारी घोषणा
कांग्रेसका युवाहरूको ढुकढुकी खड्ग फागोलाई सभापतिमा उम्मेदवार बन्न दबाब
सबैका प्रिय प्रकाश पुनः वडा सभापति !